ရန်ကုန်၊မတ်လ ၁၉ ရက်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မှာ သီလရှင်အပါး ၅ဝဝ ၀တ်ပွဲကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ဒီလ ၅ ရက်ကနေ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြိုင်သီလရှင်စာသင်တိုက်/သီလရှင် ပညာရေးကျောင်းရဲ့ ပဉ္စမအကြိမ် ဒုလ္လဘသီလရှင်ဝတ်ပွဲမှာပါ။
အစိုးရ ရုပ်သံသတင်းတွေမှာ ပါလွန်းလို့ တချိန်က တီဗီမင်းသားလို့ လူပြောများတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်ကိုအစိုးရရဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ဖန်သာြး ပင်ေ တွပေါ်မှာ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက် အတွင်းက ပြန် လည် မြင်တွေ့ရ ပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုသည် ရေကိုရွှေအဖြစ် ပြောင်းလဲစေကြောင်း သုတေသီများ တွေ့ရှိ
ငလျင်လှုပ် နေစဉ်အတွင်း ပြတ်ရွေ့ ကြောင်းများ၌ ရှိသော ရေများသည် အငွေ့ပျံ၍ ရွှေအဖြစ် အနည်ကျ သွားကြောင်း မတ် ၁၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော Nature Geoscience ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆို ပါ ဖော်ပြချက်သည် ကမ္ဘာ့ ရွှေကြောကြီးများတွင် တွေ့ရသော သလင်းကျောက်နှင့် ရွှေတို့ကြား ဆက်နွှ ယ်မှု ရှိနေခြင်းကို ဖော်ပြနေကြောင်း သြစတြေးလျ နိုင်ငံ ကွင်းစလန်း တက္ကသိုလ် မှ ဘူမိ ရူပပညာ ရှင် ဖြစ် သူ ဒိုင်ရွန်ဝဲ သာလေးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်မောင်း သင်တန်းကျောင်း အတွက် သြစတြီးယား နိုင်ငံလုပ် အမောင်းသင် လေယာဉ် DM-40 အမျိုးအစား ၃ စီး ၀ယ်ယူ
မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆ်ိပ် တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်မောင်း သင်တန်းကျောင်း အတွက် သြစတြီးယား နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် အမောင်း သင် လေယာဉ် DM-40 အမျိုးအစား ၃ စီးကို ၀ယ်ယူ ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အီရန်နျူကလီးယား သိပံ္ပပညာရှင်များအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်မှုအတွက် သံသယရှိသူ ၁၈ ဦးအား ရုံးတင် စစ်ဆေးမည်
အီရန်နျူကလီးယား သိပံ္ပပညာရှင်များအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်မှုအတွက် သံသယရှိသူ ၁၈ ဦးအား ရုံးတင် စစ်ဆေး မည် ဖြစ်ကြောင်း အီရန်အစိုး ရ ရှေ့နေ အာဘတ်စ်ဂျာဖရီ ဒေါ်လာတာ ဘာဒီက မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဗုဒ္ဓဂယာနှင့်ပုံစံတူတည်ဆောက်ထားသော နေပြည်တော်ဗုဒ္ဓဂယာစီမံကိန်းရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါး ပြီးစီးနေပြီဖြစ်၍ နိုင်ငံတဝန်းရှိ ပြည်သူများ လာရောက် ဖူးမျှော်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ သက် ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုလိုက်သည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပုံစံတူ ဗုဒ္ဓဂယာထဲမှ မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – မြန်မာ့အလင်း)
***မြအေးက ၈၈၈၈ တုန်းက တကယ်ကျောင်းသားလား....????***
မူဆလင်မြအေးသည် ၈၈၈၈ တုန်းက ကျောင်းသားတဦးမဟုတ်တော့ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အတွင်း မြအေး ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ . . . မြအေးဘာမှမလုပ်ပါ။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံတုန်း က ပေါ်ထွက် လာသောကျောင်းသားများဖြစ်သောမင်းကိုနိုင်နှင့်မိုးသီးဇွန်တို့ကို ၈၈၈၈ တုန်းကမြအေးအမည် ကြားဘူးသ လား၊ မြအေးနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဘူးသလားဟု မေးလျှင်တူညီသော အဖြေထွက်ရှိ မည် ဖြစ် သည်။ အဖြေ ကတော့ နိုးဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးသီးဇွန်ကတော့ အခုသူများရောင်လို့ နည်းနည်းရောင်ချင်နေသည်။ ဒီနေရာကနေ အကြံပေးချင်တာကတော့၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးကြည့်။ ငါ၊သူ့ကို ၈၈၈၈ တုန်းကကြား ဘူးလား . . . နိုး။ ငါသူနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဘူးလား . . . . . နိုး။ ခဏခဏရွတ်ပြီးကိုယ်ဘာသာ ကိုယ်မေး သင့်ကြောင်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဣဿာနှင့် အစဉ်အမြဲ ဒွန်တွဲနေသည်။ မစ္ဆရိယအားဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် (၅)မျိုးရှိကြောင်း တွေ့ရ၏။
ယင်းဝန်တိုခြင်း မစ္ဆရိယ (၅)မျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ “ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်” တွင် ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မှု၍ “အဌသာလိနီအဌကထာ” ဖြင့် အကျယ်ခဲ့ပြဆိုထားသည်ကာ…
ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အများအပြား ပါဝင်သည့် ညီလာခံ တရပ်ကို လားရှိုးမြို့တွင် ကျင်းပကြမည် ဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဝေဟင်ပိုင်နက်အတွင်း နျူကလီးယားဗုံး သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်သော B-52 ဗုံးကြဲေ လယာဉ် လေ့ကျင့်ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်က ပြောကြားသည်။
ရွှေတြိဂံဒေသ မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၃ ဦးသတ်ဖြတ်မှု၌စွပ်စွဲခံရပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရုံးတင် စစ်ဆေးခံရသောစိုင်းနော်ခမ်းအမှုအတွက်နိုင်ငံတော်သက်သေအဖြစ်စစ်ဆေးဖို့ အပို့ခံရသူ စိုင်းအောင်မြတ် အား တရုတ်အစိုးရက မြန်မာ အစိုးရထံ ပြန်လည်လွှဲအပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေတဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘော့ကား (Bob Carr) နဲ့ အမေရိ ကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန် ကယ်ရီ (John Kerry) တို့ မနေ့က တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့် အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။ အသေးစိတ် ပြောဆိုဆွေးနွေးတာ မရှိပေမဲ့၊ သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ပြောအရဆိုရင်တော့ လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အပေါ်မှာ ကျေနပ်ကြပုံ ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။ အမေရိ ကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ရီနဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကား တို့နှစ်ဦး ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာပဲသူတို့နှစ်ဦး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းရပ်တွေကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတဲ့အထဲ မြန် မာနိုင်ငံ ကိစ္စပါ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတယ် လို့ ပြောခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအေနေ တိုးတက် လာရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ် လို့ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး ကယ်ရီ က ပြောသွားပါတယ်။
စက်ရုပ်စစ်ပွဲများ ဖြစ်လာရန် အလှမ်းမဝေးတော့ကြောင်း ပညာရှင်များ သုံးသပ်
လန်ဒန်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်
လက်ရှိ အချိန်တွင် မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များကို စစ်ရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရန် အား ယူနေပြီ ဖြစ်ကာ အနာဂတ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ လူကိုင်တိုင် ပါဝင်မောင်းနှင်ခြင်း မရှိသည့် စက်ယန္တရား များ သည် စစ်ဆင်ရေး နယ်ပယ်တွင် အဓိက အားပြုလက်နက်များ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်
ရခိုင်အရေးအခင်း အတွင်း မွတ်ဆလင်များအား အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နေပါသည်ဟု ခေါင်းစဉ် တပ်ကာ ဓါတ်ပုံများဖြင့် နိုင်ငံတကာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြားသတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့မူများမှာ မှန်ကန်မူ မရှိကြောင်း ယနေ့ထုတ် The Daily star သတင်းစာက ဓါတ်ပုံများနှင့် တကွ စာမျက် နာပြည့် ဖေါ်ပြကာ ဖွင့်ချလိုက်သည်။